Total call recorder ရှိရင်ပေးကြပါ - MYSTERY ZILLION
Total call recorder ရှိရင်ပေးကြပါ
March 2011 edited April 2011 in Android
Total recall call recorder က Full version မရတော့ တစ်လပဲသုံးလို.ရတယ် ၊full version ရှိရင်ပို.ပေးကြပါဦး? creck / serial လဲမမေ့နဲ.ဦး
Try these link. :rolleyes:
fine, thank for your help!
andriod မှာ call record သုံးရင် ဟိုဘက်ကအသံကမကြားရတာတို ့တိုးနေတာတို ့ဖြစ်တတ်တယ်။call recorder ပေါင်းလဲစုံပြီအဆင်မပြေဘူး။သိတဲ့သူများရှိရင်အကြံပေးကြပါဦး
Total Recall Call Recorder Android full v1.5.0
ဟုတ်ပါတယ်။ Android ထဲမှာ သုံးသမျှ Total Recall မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရှိသမျှ Call Recording ဆော့ဝဲတိုင်းလိုလို အဲ့လိုဖြစ်တာပါ။ အဲ့ဒါကတော့ android ရဲ့ အားနည်းချက်တစ်ခုလို့ ပြောရမှာပါ ။ <br>
Try this link. It works for me.<br>http://dl163.duckload.com/download/190122709ddff70ae58b2f06f5f58cd8/cb51a628/20110411/65AB696B5D8EB1E2/t172.apk